Noti Mahosi iyi webhusaiti yanga ichikupa matipi uye manomano kubva muna 2011 kuitira kuti ugone kutarisira equine yako nenzira inokwanisika: nerudo, neruremekedzo uye nezvose izvo chero mutasvi kana fan yeidzi mhuka anofanira kuziva, senge hosha dzadzo dzemabhiza kana mhando dzakasiyana dziripo.
Dare rekunyora reNoti Caballos rinoumbwa nevanhu vanoda mhuka idzi, uye vari nyanzvi mazviri. Kana iwe uchida kubatana nesu, zadza fomu rinotevera kuitira kuti tigone kusangana.
Kubva ndichiri mudiki kwazvo ndakaona kuti mabhiza ndidzo zvisikwa zvinoshamisa izvo zvaunogona kuona nazvo pasi kubva pane imwe pfungwa kusvika pakudzidza zvakawanda nezvehunhu hwavo. Nyika yakaenzana inonakidza senyika yevanhu uye mazhinji acho anokupa rudo, kambani, kuvimbika uye pamusoro pezvose zvinokudzidzisa kuti kwenguva zhinji vanogona kutora mweya wako.
Mabhiza anga ari chikamu chehupenyu hwangu kwenguva yakareba. Sezvo ini ndaive tadpole ndanga ndichishamisika nemapikicha, uye zvakanyanya kurarama. Ini ndinozviona semhuka dzinoshamisa, dzakanaka kwazvo, asi zvakare dzakangwara.
Dressage bhiza mukadzi. Parizvino achishanda semonitor uye kuwisirwa mabhiza kuCelta Equestrian Equestrian Social Center, yeHijos de Castro y Lorenzo Livestock. Ndine Spanish-Arab Arab gelding uye tese tiri kushanda pamwe muhunyanzvi hweDressage. Ini ndaive ndisina kana kushandisa chikonzero uye ndanga ndave kutofarira zvebhiza. Imwe yehope dzangu huru kugona kuendesa ruzivo rwechokwadi kune vaverengi vangu izvo zvinozovabatsira kunatsiridza ruzivo rwavo nemhuka dzinoshamisa, ndosaka ini zvakare ndine equine webhusaiti.
Kushushikana pamusoro pemabhiza kubva pazera diki kwazvo. Ini ndinoda kudzidza nekuudza zvinhu zvitsva nezve mhuka idzi, dzakanaka uye dzakanaka. Uye ndezvekuti kana iwe ukavachengeta zvakanaka, kana iwe ukavapa zvese zvavanoda, iwe uchagashira yakawanda mukudzoka. Iwe unongofanirwa kuve nemoyo murefu nemabhiza, nekuti anogona kuburitsa akanakisa mune yega yega.